Ukubukwa Kwekhasi ngeke Kufe | Martech Zone
Ukubukwa Kwekhasi ngeke Kufe
NgoMgqibelo, Disemba 2, 2006 NgoLwesihlanu, Okthoba 24, 2014 Douglas Karr
Ngiyahlonipha USteve Rubel, kepha angivumelani neposi lakhe lamanje elisho ukuthi ukushona okuseduze kokubukwa kwekhasi ngo-2010. USteven uthi:
Lawa masayithi azokwakhiwa nge-Ajax, iFlash nobunye ubuchwepheshe obusebenzisanayo obuvumela umsebenzisi ukuthi aqhube izindaba ngaphakathi kwekhasi elilodwa lewebhu - njengeGmail noma iGoogle Reader. Lokhu kususa isidingo sokuchofoza kusuka ekhasini elilodwa kuya kwelinye. Ukunwetshwa kwewebhu kuzosheshisa lokhu kuphela.
Lokhu akunjalo neze. Zonke ezinkulu analytics abasebenzisi banezindlela zokuhlanganisa ukubukwa kwekhasi ngesikripthi esiseceleni kwamakhasimende. Eqinisweni, ngicabanga ukuthi i- analytics umkhakha ubulokhu Phambili wejika, ususukile ekuhlukanisweni kwelogi waya ekubhaleni kohlangothi lwamakhasimende eminyakeni edlule. Manje, banikela ngekhono lokuthumela okuguquguqukayo emuva kufayela le- analytics injini ekhomba ngokunembile ukuxhumana kwamakhasimende.
Ngizosho ukuthi incazelo 'yekhasi' izoshintsha. Ikhasi lingaba yingxenye yekhasi, iwijethi, okuphakelayo, njll. Ukuxhumana okuvela kwiklayenti kusakhonjiswa kahle ngale ndlela, noma kunjalo. Lapho iklayenti lingachofoza khona isixhumanisi bese livela ikhasi elisha ngaphambili, manje bachofoza isixhumanisi futhi okuqukethwe kushintshiwe. Lokhu kusengukuxhumana futhi kungalinganiswa ngempumelelo.
Ukusetshenziswa kwe-RSS kukalwa ngokunembile ngezinhlelo zokusebenza ezinjenge-Feedburner, eqondisa kabusha okuphakelayo kwakho ngenjini yabo ukuze kukalwe. Amawijethi athuthukisa izinjini zawo ze-Analytics, njengoba kuboniswe lapha nge MuseStorm. I-Flash ingasebenzisa noma yikuphi / konke lokhu kuxhumana okune- analytics amafemu.
Icala ngephuzu: I-Payraise Calculator (elinye lamasayithi ami), lakhiwe nge-Ajax. Lapho umsebenzisi echofoza u- “Bala” futhi ngilayisha ukubalwa okuqediwe ekhasini lokuqala, ngidlulisa lolo lwazi ku-Google Analytics. Lapho ngibheka iGoogle Analytics, ngiyabona ngokunembile ukuthi bangaki abantu abavakashele isiza, nokuthi bangaki 'ukubukwa kwamakhasi' okwenziwe (Angikubambi ngempela ukubalwa, noma kunjalo!).
Ukubikezela kwami? Ngo-2010, amafemu we-Analytics azobonisa ngokunembile ukubukwa kwamakhasi nganoma yikuphi ukusetshenziswa okuvamile noma okungavamile kokuqukethwe noma isayithi lakho… kungaba yiFlash, i-Ajax, noma amawijethi. Iwashi libheke kulezi zinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ezenza lokhu manje. Ini kuthanda ushintsho ukuqonda kwethu kokuthi empeleni 'ukubuka ikhasi' kuyini. Ngenkathi ithathwa njengekhasi eliphelele lesiphequluli phambilini, manje kuzoba isilinganiso sokuxhumana newebhusayithi. Kodwa-ke, lokho kusebenzisana akubalulekile kangako kumakethe noma kumkhangisi.
Ngenhlonipho efanele, Steve, ngizokuthokozela ukubheja idina elihle ngokungafani kwethu ngombono!
Tags: Ama-Analyticsukubuka ikhasi
Isimilo sokuxhumana nabantu - Ungabi yiSNOB
Njalo iHhovisi Lasekhaya Lidinga Eyodwa!
Dec 3, 2006 ku-12: 49 AM
Ngivumelana nawe lapho ukuthi incazelo yekhasi izoshintsha. Bekulokhu kuguquka kusukela ngesikhathi lapho kwakhiwa khona umqondo wama-portlet.
Kodwa-ke, nginomuzwa wokuthi amamethrikhi anjengokubukwa kwamakhasi akhiwe phezulu kuphela. Ekugcineni ukukhangisa kuzosebenza hhayi ngenxa yethrafikhi kepha ngoba bangaki abachofoza kukho bese benza okwenziwayo. Lokhu kusho ukuthi ukukhangisa kufanele kubheke ithrafikhi esezingeni hhayi ithrafikhi kuphela.
Nov 1, 2011 ngo-10: 37 PM
Ngifisa sengathi ngabe uSteve Rubel ubengithathile ngaleso sidlo!